03 | March | 2013 | Danya Wadi
ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်းဘာဂ့်မြို့၌အစ္စလာမ်ရုံးပိတ် ရက်များကိုအသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံတကာသတင်း …
By danyawadi March 3, 2013 Leaveacomment
သြဂုတ်၊ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဟမ်းဘာဂ့် မြို့တော်ဝန် Olaf Scholz ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ ဟမ်းဘာဂ့်မြို့ (Hamburg)ဟာ အစ္စလာမ်ရုံးပိတ်ရက်များကို ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြု ကျင့်သုံးသော မြို့ဖြစ်လာပါတယ်။ မွတ်စလင် အလုပ်သမားများ၊ ကျောင်းသားများ ပွဲတော်ရက်များမှာ အနားယူခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရကျောင်းများတွင်လည်း အစ္စလာမ်သင်ခန်းစာများ ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ လူဦးရေ ၈၂-သန်းအနက် ၄-သန်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်၍ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံသား ခံယူရရှိထားသူများဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်ဦးရေ တစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိတဲ့ ဟမ်းဘာဂ့်မြို့ (Hamburg)အတွက် ဒီဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ဟမ်းဘာဂ့်မြို့ (Hamburg) အစ္စလာမ်လူမှုသိုင်းဝိုင်းကောင်စီမှ ဒေနီယလ် အဘဒင် (Daniel Abdin) က ဒီမြောက် ပိုင်းပြည် နယ်ရှိ အစိုးရကျောင်းများတွင်လည်း အစ္စလာမ်သင်ခန်းစာများ ပို့ချခြင်းဟာ အခြားသော […]
By danyawadi March 3, 2013 1 Comment
ဆောင်းပါး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၃ M-Media Amb. Ufuk Gokcen နှင့် ဘန်ကီမွန်း အစ္စလာမ့်ရေးရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Organization of Islamic Cooperation – OIC ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်နဲ့သံအမတ်ဖြစ်သူ Amb. Ufuk Gokcen က ဒီလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခ လုပ် ရပ်တွေ ဟာ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့လူနည်းစု မွတ်စ်လင်မ်တွေအကြား ဘာသာရေးထိပ်တိုက်တွေ့မှု မဟုတ်ဘ၊ဲ ရိုဟင်ဂျာ လူနည်းစုဆီကိုသာရှေ့ရှုနေတဲ့ မကျေနပ်ချက်၊ အငြိုးအာဃာတ အကျိုးဆက်လို့ဆိုပြီး ကျွန်တော့် အမြင်ဖြစ် သွားခဲ့ရတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း […]
Breaking News : Maungdow ,Udong village
other friends shared Aleythan Kyaw‘s photo. This is arkan mdw south udoung village tract south hamlet by rakhine NATALA stremist on 02/03/2013 at night Sayed Ullah s/o Siddik 35 years.when he was watching his betel leaf farm near the natala rakhine village. The natala rakhine group came his farm to rob betel leaf and argue […]
ဦးသိန်းစိန်ပါတီဥက္ကဌ နှင့်သမ္မတရာထူး ၂ ခုလုံး တာဝန်ယူထားခြင်းမှာ မှန်ကန်မှုရှိ၊မရှိ ခုံရုံးအဆုံးအဆြတ်ယူမည် …
ပါတီ ဥက္ကဌ သမ္မတ မလုပ်ရ ဟု ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ (ပုဒ်မ ၆၄ – ပုဒ်မ- ၂၃၂ ဋ) က ပြဌာန်းထားသော်လည်း ဦးသိန်းစိန် ရာထူး ၂ ခုလုံးမှာတာဝန်ယူထားခြင်း ကိစ္စ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဖွဲ့အသစ်ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်တာမို့ အဆုံးအဖြတ် ရယူရတော့မည် (မြန်မာသံတော်ဆင့် မတ် ၂-၈ ၂၀၁၃)